ကော်နဲလ်ကျောင်းသား 'FUCK BLACK PEOPLE' ဟူသောကြွေးကြော်သံကိုကြားရခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့် BLACK LIVES MATTER လိုအပ်သည်ကိုပြသည် - နှုန်းထားများ
ကော်နဲလ်ကျောင်းသား 'Fuck Black people' ဟူသောကြွေးကြော်သံကိုကြားရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့် Black Lives Matter လိုအပ်သည်ကိုဖော်ပြသည်
ကျနော်တို့ Thurston တံတားဖြတ်ကူးစတင်သကဲ့သို့ဒီနေ့ရဲ့ဘဝ Lives ကိစ္စပွဲမှာအခြားအဘက်မှာလမ်းလျှောက်အဖြူကျောင်းသားကြွေးကြော်: Fuck Black ကလူ!
သူတကယ်ပြောခဲ့တာလား။ ငါ့သူငယ်ချင်း Joey ကိုမေးတယ် သူကရယ်စရာဟာသတစ်ခုလိုပြောလိုက်သလိုပဲ - လူအုပ်နှင့်အတူမှတ်ပုံမတင်ဘဲ၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာမယုံနိုင်စရာဖြစ်ပေမယ့်မှားစရာမရှိဘူး၊ ငါသူ့ကိုပြောတာကိုကြားခဲ့ရတယ်။
အဖြူရောင်ကျောင်းသားတစ် ဦး သည်ကြိုတင်မြင်ကွင်းရှိသောကောင်လေးတစ်ယောက်သည် North Campus ၏လမ်းကွေ့အတိုင်းလျှောက်သွားသောကျောင်းသားအဆောင်များဆီသို့သွားခဲ့သည်။ ထိုအခါချီတက်ပွဲဆက်ပြောသည်။
သင်က Cornell ၌ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော Black Lives Matter ပွဲလိုအပ်သည်ဆိုသည့်သက်သေပြလိုပါက၎င်းသည်၎င်းသည်ဆန္ဒပြသူတစ်စုတွင် Fuck Black ကိုအော်ဟစ်ရန်ရယ်စရာဖြစ်သည်ဟုကျောင်းသားတစ် ဦး ကယူဆခဲ့သည်။
1975 1975 ကိုခေါ်အဘယ်ကြောင့်
ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း Lisa ကို Vollmann
ယနေ့ဖြစ်ရပ်သည်ဆန္ဒပြသူများ၏စက်ဝိုင်းသည်ဒုတိယအနေဖြင့်ပိုမိုကြီးထွားလာရာမြောက်နှင့်ဗဟိုကျောင်းများကိုခွဲခြားထားသော Thurston တံတား၏အဆုံးတွင်စတင်ခဲ့သည်။
ငါတံတားကိုဖြတ်ပြီးလာတာနဲ့အမျှလူမျိုးနှင့်နောက်ခံအမျိုးမျိုးရှိသောလူအများစုကအများအားဖြင့်အနက်ရောင်ဝတ်ဆင်ကြပြီးစက်ဝိုင်းထဲကို ၀ င်လာကြသည်။
မကြာခင်မှာပဲလူ ၁၀၀ လောက်ဟာလူမည်းတွေ ၀ တ်ဆင်ထားတဲ့အာဖရိကန် - အမေရိကန်ကျောင်းသားသုံးယောက်ပတ်ပတ်လည်မှာလက်စွပ်တစ်လုံးပေါ်လာတယ်။ ကျောင်းသားသုံး ဦး အနက်မှလူငယ်များသည်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများဖြစ်သည့် Black Lives Matter ကိုတတိယကျောင်းသား၊ အမျိုးသမီးတစ် ဦး အဖြစ်ဖတ်သည့်အလံကြီးတစ်ခု၏အဆုံးသတ်ကိုကိုင်ထားပြီးသူမသည်ပါးစပ်အထိ DIRECTOR ဟူသောစကားလုံးဖြင့်ယာယီမဂ္ဂဇင်းကိုကိုင်ဆောင်ထားသည်။
အိုကေ၊ ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစတင်မလဲဆိုတာကိုသူကစက်ဝိုင်းရဲ့အထင်ရှားဆုံးအလွှာကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူမပြောတာကသူမသည် megaphone မှတဆင့်ပြောကြားခဲ့သည်။
ငါနာမည်တစ်ခုပြောတဲ့အခါ, သင် '' သူတို့ရဲ့ဘဝအရေးပါသော '' ပြန်အော်ပါလိမ့်မယ်။ Trayvon Martin!
သူတို့၏ဘဝသည်အရေးပါခဲ့သည်! ကျနော်တို့မဟုတ်ဘဲချီတုံချတုံအသံ, တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
Eric Garner သူမပြင်းထန်စွာနှင့်အတူအော်။
ကျွန်ုပ်၏အဖြူရောင် RA ဖြစ်သော Jessie သည်ကျွန်ုပ်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နေသည်။ ငါ pick-up ဘတ်စကက်ဘောကစားနှင့်အတူအာရှလျောက်ပတ်သောအကြီးတန်းအကြီးတန်းငါ့ကိုစွန့်ခွာလူသုံးယောက်ရပ်နေ၏။
ငါသိတဲ့လူတွေကို၊ ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်မယ်၊ လူမည်းတွေရဲ့ဘ ၀ တွေကိုဂရုစိုက်ရမယ်လို့ငါမထင်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုတွေ့ရတာကျွန်တော့်အတွက်နှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေတယ်။
ဇီဝဗေဒနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအထူးပြုအငယ်တန်းအမ်မလီကသူမအနေဖြင့် Black Lives Matter အတွက်စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသရန်၊ အနက်ရောင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်လူမည်းနှင့်အညိုရောင်လူများ၏သေဆုံးမှုကိုအာရုံစိုက်ရန်ရှိခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အက်ရှလေ, အကြီးတန်းဓာတုဗေဒဗိုလ်မှူး, ဆက်ပြောသည်: ငါသွားပြီအခြားအနက်ရောင်ဘဝနေ့တိုင်းနိုးထဖို့ငြီးငွေ့တယ်။
သူမဆက်လက်မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပြီး၊ ကော်နဲလ်ကျောင်းသားကျောင်းသားသမဂ္ဂသည်အကြမ်းဖက်မှုမကျူးလွန်သည့်ရာဇ ၀ တ်မှုများအတွက်ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရဆဲရှိသူများနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်စွာရပ်တည်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်
လက်ျာမိန်းကလေးတစ် ဦး ပွတ်သပ်ဖို့ဘယ်လို
ထို့နောက်သူမက Black ကျောင်းသားသမဂ္ဂရှိတောင်းဆိုချက် ၆ ခုကိုစာရင်းပြုစုခဲ့သည်။
- နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိအာဖရိကန်အမေရိကန်များ၏ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
- အာဖရိက - အမေရိကန်အားလုံးအတွက်စီးပွားရေးတရားမျှတမှု
- ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ Black Equal နိုင်ငံရေးအာဏာ
တရားမျှတမှုမရှိ၊ သူမအော် တရားမျှတမှုမရှိ၊ တရားမျှတမှုမရှိ၊
လူအုပ်ကနောက်ဆုံးမှာဖမ်းမိတယ်။ တရားမျှတမှုမရှိ၊ ကျနော်တို့သူမနှင့်အတူအော်။
ဆက်လုပ်ပါ ဦး! သူမ Thurston တံတားဆီသို့စက်ဝိုင်းမှတဆင့်လမ်းလျှောက်အဖြစ်ဒါရိုက်တာကဆိုသည်။ တရားမျှတမှုမရှိ၊
steve bannon ရဲ့မျက်နှာမှာဘာမှားသလဲ
ဆန္ဒပြသူတွေက Sharpie မှာရေးထားတဲ့စာတွေပါတဲ့အိမ်လုပ်ကတ်ထူပြားပိုစတာတွေကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
မျက်မှောက်ခေတ် Lynchings တန်းတူရဲလူသတ်မှု!
instagram ပေါ်ရှိလူကြိုက်အများဆုံးဓာတ်ပုံ ၁၀ ခု
နောက်ဆုံးတွင်ဓမ္မသီချင်းသည်တရားမျှတမှုမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိ၊ က Black ဘဝသို့မည်သည့်ငြိမ်းချမ်းရေးမျှပြောင်းလဲသွားသည်။
Black ကကိစ္စရပ်! Black ကကိစ္စရပ်! ဆန္ဒပြသူတွေဟာ Thurston တံတားကိုဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်လာတာနဲ့အမျှသံသယဖြစ်စရာပါ။
လမ်း၏အခြားဘက်ခြမ်းမှတံတားကိုဖြတ်ကူးအဖြူကျောင်းသားအော်သောအခါ: ထိုလူမည်း Fuck! တုန့်ပြန်။
ဆန္ဒပြသူတွေကိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဆန္ဒပြမှုကော်နဲလ်၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ဝင်အဖြစ် Black ကဘဝတွေကို၏မာနထောင်လွှားဓမ္မသီချင်းဆက်ပြောသည်။
အားဖြင့်အပိုဆောင်းအစီရင်ခံခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံ Lisa ကို Vollmann ။
သင်ဟယ်လိုဝိန်းပွဲအတွက်ဒီ 'Ghosted' ၀ တ်စုံကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်သူ့ကိုသင်ကျိန်းသေသေချာအောင်လုပ်ပါ။
sororities နှင့်ပတ်သက်။ အမှန်တရား: မဟုတ်အရာအားလုံးသည်ပုံရသည်အရာ
ချိုးဖောက်မှု - I75 မှာအကြီးအကျယ်ယာဉ်မတော်တဆမှု၊ တစ် ဦး သေဆုံးပြီးခြောက် ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်
RuPaul ၏ Drag Race ရာသီ 12 သည်ယခုလကုန်တွင် Netflix UK သို့ရောက်ရှိလာသည်။
Belle Delphine ကဘယ်သူလဲ။ သူမအဖမ်းခံခဲ့ရကြောင်းဗြိတိန် YouTuber
Uber Edinburgh မှရောက်လေပြီ
BU အကြောင်းကို Savage Urban အဘိဓါန် entries တွေကို
ကျားဘုရင်၏ Doc Antle ကို Britney Spears ၏အထင်ကရ VMA စွမ်းဆောင်ချက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်